"Ọnwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ nke ukwuu" site na Inés Plana na-aga ahịa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«Anwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ kachasị» site na Inés Plana na-ere ahịa
Carmen Guillen | | Akwụkwọ, Akwụkwọ
Taa, Jenụwarị 9, akwụkwọ mbụ nke Ines Plana, "Anwụ anwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ kasị". Akwukwo edeziri Akwụkwọ nke Akwụkwọ, kpọmkwem site Ugwuoba, na nke onye edemede ahụ ji afọ 5 gara aga nke ndụ ya.
Ma gịnị banyere ya "Anwụ anwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ kasị"? Kedu ụdị akwụkwọ ọ bụ? Anyị ga-agwa gị ihe a niile na ndị ọzọ n'okpuru.
1 Nkọwa nke «Anwu abughi ihe na-ewute nke kachasi»
1.1 Akwụkwọ data
2 Ọnye na-bụ Inés Plana?
Nkọwa nke «Anwu abughi ihe na-ewute nke kachasi»
Otu nwoke gosipụtara na a kwụgburu ya n'oké ọhịa fir na mpụga Madrid, anya ya apụọ. N’otu n’ime akpa ya bụ otu mpempe akwụkwọ e dere aha na adres nke otu nwanyị: Sara Azcárraga, onye bi kilomita ole na ole site na mpụ ahụ. N'adịghị ike, onye owu na-ama, onye na-a vụ mmanya vodka, Sara na-ezere mmekọrịta ọ bụla na ndị mmadụ ma na-arụ ọrụ n'ụlọ. Onye na-ahụ maka ndị ọrụ nchekwa bụ Lieutenant Julián Tresser na-ahụ maka okwu a, nke onye na-eto eto Corporal Coira na-enyere aka, onye na-eche nyocha nyocha nke mpụ na nke mbụ ya, nyocha siri ike, yana enweghị ihe ngosi ọ bụla, yana ọtụtụ enigmas. Dika Lieutenant Tresser na-aga n’ihu n’ime nyocha ya, o gha achoputa ihe ndi gha eme ka odidi ya dikwa ndu ma duru ya gaa oku nke ga egosi ndu ya rue mgbe ebighi ebi
Akwụkwọ akụkọ pụrụ iche nke nwere atụmatụ hypnotic agbakwunyere dị ka mgbaghoju anya na mkpụrụedemede nwere mkpụrụ obi nke adọwara n'etiti ezi na ihe ọjọọ.
Ọnụọgụ nke ibe: 440 peeji
Ihe ngosi: Ihe mkpuchi na jaket uzuzu
Ahịa: euro 19,90
Ọnye na-bụ Inés Plana?
Inés Plana mụrụ na Huesca, ọkachasị na Barbastro. O nwere asambodo na sayensị sayensị na Mahadum kwurula nke Barcelona mana ọ mepụtara ọrụ ọkachamara ya na Madrid mgbe niile. Ọ rụọ ọrụ na mgbasa ozi mbipụta dị iche iche na, na mpaghara nchịkọta akụkọ, mepụtala na ịhazi nchịkọta dị iche iche nke aha metụtara mgbasa nke akụkọ ntolite na nka. Ọ bụ onye isi ugbu a na magazin ahụ "Bie ndụ dị mma".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » «Anwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ kachasị» site na Inés Plana na-ere ahịa